» हेटौंडा मेयर कप : वडा नं. ९ र १९ बिजयी
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:२२
मकवानपुर । नगर खेलकुद विकास समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा भैरहेको वडास्तरीय हेटौंडा मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा आज भएको पहिलो खेलमा वडा नंं ९ ले वडा नं.१७ लाई ट्राइब्रेकरमा पराजित गरेको छ । ट्राइबे्रकरमा वडा नं.९ ले १७ लाई ५–४ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
वडा ९ का डेबिड रुम्बाले खेलको छैठौँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । खेलको १३ औँ मिनेटमा वडा नं. १७ का समिराज थोकरले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
थोकरले खेलको १८ औँ मिनेटमा दोस्रो गोल गदै वडा १७ लाई २–१ गोलको अग्रता दिए । ७४ औँ मिनेटमा वडा नं. ९ का पुर्ण श्रेष्ठले गोल गर्दै खेल २–२ को बराबरीमा ल्याए । दुबै टोलीबाट थप गोल हुन नसकेपछि खेलको ट्राइब्रेकरबाट गरिएको हो ।
टाइब्रेकरमा वडा नं. ९ का सुनिल मल्ल, निरज श्रेष्ठ, कृतराज पराजुली, अमिर श्रेष्ठ र डेबिड रुम्बाले गोल गरेका थिए । वडा नं.१७ का सुदिश तिवारी, सुसन श्रेष्ठ, आसिष भुजेल र बिकल राईले मात्रे गोल गर्न सफल भएका थिए । दुई गोल गरेका वडा नं. १७ का समिराज थोकर म्यानअफ द म्याच घोषित भए ।
त्यस्तै दोस्रो खेलमा वडा नं.१९ ले वडा नं. १६ लाई १–० गोलले पराजित गरेको छ । वडा नंं १९ लाई जित दिलाउनको लागि एलिश घलानले गोल गरे । उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गरेका वडा नं.१९ का अजय थोकर म्यानअफ द म्याच घोषित भए ।
जितसंगै दुबै टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । आईतबार (भोलि) दुई खेल हुनेछ । समुह सि को वडा नं. ४ ले २ संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने समुह बि को वडा नं. ७ ले ३ संग प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा १९ वटा टोलीको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगिताको विजेतालाई नगद दुई लाख रुपैयाँ, उपविजेताले नगद एक लाख ५० हजार रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणापत्र प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद दशहजार रुपैयाँ, उत्कृष्ट डिफेन्डर, मिडफिल्डर, गोलरक्षक, प्रशिक्षक तथा सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनही पाँच/पाँचहजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।